पहिलो घटनाः पनडुब्बीमा भेटियो १३ अर्ब रुपैयाँको लागुऔषध | Ratopati
पहिलो घटनाः पनडुब्बीमा भेटियो १३ अर्ब रुपैयाँको लागुऔषध
आन्ध्र महासागरबाट स्प्यानिश अधिकारीले एक पनडुब्बीबाट तीन टन कोकिन जफत गरेको जानकारी दिएको छ । स्पेनको ग्यालिसियास्थित उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा अवरुद्ध गरिएको उक्त पनडुब्बीमा १२१ मिलियन डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को लागुऔषध भेटिएको छ ।
पनडुब्बीमा रहेका तीनजना सदस्यमध्ये दुई इक्वोडरका नागरिकलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ भने तेस्रो स्पयानिश नागरिक फरार छन् ।
कोलोम्बियाबाट युरोपको यात्रा तय गरेको उक्त पनडुब्बीले ७ हजार ६ सय ९० किलोमिटर यात्रा गरेपछि आन्ध्र महासागरमा पक्राउ परेको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले लागुऔषध ढुवानी गरिरहेको गिरोह निकै ठूलो भएको अनुमान गरेको छ किनभने उक्त पनडुब्बीको मूल्य मात्रै २.७ मिलियन डलर (करिब ३० करोड रुपैयाँ बढी) छ ।
स्प्यानिश अधिकारीले पनडुब्बी प्रयोग गरेर लागुऔषध ढुवानी गरिएको यो देशकै पहिलो घटना भएको बताएका छन् । पुलिसले सोमबारदेखि कोकिनका प्याकेटहरु निकाल्न सुरु गरेको छ ।
नेपाल र ताजकिस्तान प्रतिस्पर्धा गर्दै
निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्ड
चोलेन्द्र श्रीमान‍्को एकल इजलासमा २८ मुद्दा !
विक्कीसँग विवाहको खबरबारे के भन्छिन् कटरिना ?
मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेसँगै शपथ लिने तीन मन्त्रीको नाम तय
प्रहरीको सानो दर्जामा तीनवटा पद थप्ने प्रस्ताव अर्थबाट स्वीकृत, गृहमा अड्कियो
‘हल्का रमाइलो’ नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नपाइने
राज–शिल्पाको ५० करोडको मानहानिविरुद्ध शर्लिनद्वारा ७५ करोडको मुद्दा दर्ता